Trump oo balan qaaday in uu soo celin doono nashaadkii Maraykanka - Somaliland Post
Home News Trump oo balan qaaday in uu soo celin doono nashaadkii Maraykanka
USA(SLpost) Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa balan qaaday “in uu soo celin doono” nashaadkii Maraykanka, isaga oo khudbaddiisii u horaysay u jeediyay aqalka Congress-ka.
Khudbaddiisan ayaa looga gol leeyahay in wax lagaga badalo dadka badan ee ay ka daadagi la’dahay madaxtinimada Trump.
Wuxuu xildhibaanada u sheegay in shuruucda socdaalka oo la dhaqan geliyo ay horseedi doonto in ay sare u qaadaan dhaqaalaha dadka dalka soo gala, in la caawiyo dadka shaqo la’aanta ah, in la badbaadiyo balaayiin doolar, iyo bulshooyinka oo dhan ay nabad ku naaloodaan.
Trump wuxuu yiri Maraykanku “wuxuu aad u taageersan yahay Nato”, laakiin dalalka xubnaha ka ah waa in ay “ka soo baxaan masuuliyadda dhaqaale ee saran”
Wuxuu baarlamaanka ka dalbaday “in ay go’aan qaataan ayna meesha ka saaraan oo badalaan hanaanka caafimaadka ee Obamacare, iyadoo salka loo dhigayo hannaan adeeg caafimaad u saamaxaya dadka midka hadda jira isticmaala.
Trump wuxuu ballan qaaday “canshuur dhimis ballaaran in uu u sameeyo dadka dabaqadda dhexe ah, inkastoo uusan faahfaahin badan ka bixinin.